May Nyane: သစ္စာဆိုပါသည်....
thanks u so so so so MUCH!!!!! I LOVE TIS POST!
သစ္စာစကားဟာ သိပ်ကိုအစွမ်းထက်ပါတယ်။ ကျနော်လည်းယုံကြည်လို့ ၂၁ ရက်နေ့ညက ဘုရားရှိခိုးပြီး၊ သစ္စာတိုင်တည်ခဲ့ပါသည်။ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအပါအ၀င်၊ ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ကြမယ့် ပြည်သူတွေအတွက် ဆုတောင်းသစ္စာ ပြုခဲ့ပါသည်။